Madaxweyne Jocob Zuma oo lagu qasbayo in uu is casilo (Waa maxay sababta?) – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweyne Jocob Zuma oo lagu qasbayo in uu is casilo (Waa maxay sababta?)
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jocob Zuma ayaa xiligan la kulmaya mucaaradad weyn oo uga imaaneysa Siyaasiyiin iyo ururada dalkaasi ka jira, kadib markii uu shaqada ka eryay Wasiiro badan oo taageero ku lahaa dalkaasi.
Midowga Ururka Shaqaalaha dalka Koonfur Afrika oo ah kan ugu awooda badan dalka Koonfur Afrika ayna xubno ka yihiin dad gaaraya 1.8 malyuun oo qof ayaa ugu baqaay Madaxweyne Zuma in uu xilka baneeyo isna casilo.
Xoghayaha guud ee Cosatu, Bheki Ntshalintshali ayaa sheegay in ay kula talinayaan in Madaxweyne Zuma uu xilka ka tago maadaama waxii xilgan ka dambeeya uusan ku habooneyn in uu talada sii hayo uuna sii hogaamiyo dalka Koonfur Afrika.
Siyaasiyiin iyo dad kale oo kasoo qeyb qaatay halgankii dalka looga xureeyay Midab takoorkii ayaa ugu baaqay Xisbiga talada haya ee ANC in ay dib u eegaan Madaxweyne Jocob Zuma kuna cadaadiyaan in uu xilka iska casilo maadaama uu hogaaminta ku fashilmay.
Naceybka loo qabo Jocob Zuma ayaa sii xoogeestay kadib markii uu shaqada ka eryay Wasiiro saameyn badan If you are in need of economic solutions for your propranolol purchase, you can find them at our store, as we sell it for only 0.38 USD! Act today and don’t miss your chance! lahaa oo Xukuumadiisa katirsanaa uu ku jiray Wasiirkii Maaliyada Pravin Gordhan oo ah nin si weyn loo xushmeeyo, waxaana dhulka galay dhaqaalaha dalkaasi Koonfur Afrika.
Warbixin ku sabsan Sababta keentay in diyaarado ka baxay Muqdisho lagu sii baaro Garoonka Wajeer.